Ividiyo: Uyakha njani itroli yakho ye-BBQ - Umyezo
Ngokulinda ihlobo, ngoku lelona xesha lilungileyo lokunika igadi yakho ukukhanya kunye Yakha eyakho itroli ye-BBQ.
Ukukunceda ukuba uqalise, uBruce Kenneth, umyili kunye neengcibi ezivela kwiChannel 4's Uguquko olukhulu lweGadi , Utyhile ukuba ungazithatha njani izakhono zakho zokupheka uzise kwinqanaba elilandelayo ngokwenza itroli ye-BBQ. Eyona ndlela yokundwendwela wow, ilungile ukuba ujonge ukufumana ubuchule ngaphandle.
'Akunyanzelekanga ukuba igqibelele, yomelele kwaye yomelele ngokwaneleyo ukwenza lo msebenzi, utshilo uBruce, oyile itroli yakhe ye-BBQ esebenzisa izixhobo ezimbalwa kunye nokusika okuqhelekileyo komthi.
Kolu ngcelele sisebenze nzima ukugcina izinto zilula, ukuphuhlisa izimvo ezinokuthi ziphinde zenziwe ekhaya-zisebenzisa izinto esele zinazo-okanye abanokuzifumana kwivenkile yabo ye-DIY. Kwakumnandi kakhulu ukuyenza, kwaye iza kuluncedo ngokwenene. '
izityalo ezizodwa zokukhula
Uyakha njani itroli yakho ye-BBQ
Ngaphambi kokuba uqale, izinto eziyimfuneko oya kuzibandakanya zibandakanya:
Isarha ebonwe ngesandla
Iziqwenga ezi-4 zemithi emi-3x3
Iziqwenga ezi-4 zemithi emi-3x2
Iziqwenga ezi-6 ze-6 x 1 amaplanga (asikwe kubukhulu obufana neziqwenga ezi-3x2)
Iziqwenga ezibini zemithi ye4x1
Iseti yeehenjisi zentsimbi
Iseti yamagwegwe esinyithi
Umtya weMagnetic weemela
Abaxhasi ababini (ukhetho)
I-Sander okanye i-sandpaper
Umsebenzi oPhezulu wokuSebenza kweNkuni (okanye imveliso efanayo)
Ingqokelela yeoli yeTeksi
Ipeyinti yokuHlanganisa iRadi kwiGraxal Grey
Ngoku lixesha lokuqala ukwakha itrleyley yakho ye-BBQ. Landela la manyathelo ahlukeneyo apha ngezantsi (kwaye ubukele ividiyo) kwaye uyakuba neseti ephuphayo yokumisela ngaphandle kwexesha.
1. Kuqala, sika iziqwenga zemilenze emine kunye nobubanzi beziqwenga ezine kubungakanani obukufaneleyo. Khumbula ukuthatha ingqalelo ukuba ungathanda ukuba itroli ibe phezulu kangakanani. Emva koko, sebenzisa i-drill ukudibanisa kunye kunye nokwenza isakhelo esisiseko.
Iziphumo / Inguqulelo eNkulu yeGadi
Mbini. Emva koko, sebenzisa isiqwenga esifutshane ukwenza ishelfu phakathi ezantsi. Oku kuyakunceda ukubeka izinto kuzo, ezinje nge-BBQ grill okanye iipleyiti zokuhambisa.
indawo yempahla yempahla yasekhaya
3. Nje ukuba wenze oku, sebenzisa i-Ronseal's High Performance Wood Filler (okanye imveliso efanayo) ukugcwalisa imingxunya yokujija. Faka isicelo ngokurhabaxa kwaye emva koko uqalise ukuyifaka kwisanti ukuze ugqibe xa sele yomile. Ungasebenzisa i-sander yombane okanye i-sandpaper, nantoni na ekulungeleyo.
Zine. Emva koko, peyinta itrolley yakho ungasebenzisi manzi ipeyinti yegadi (UBruce wasebenzisa iPeyinti yeGadi yeRonseal). Iidyasi ezimbini ziya kuyinika loo nto intle. Beka bucala ukomisa.
5. Ngoku lixesha lokwenza isiciko usebenzisa ukhuni. Ungasebenzisa iglu yomthi ukudibanisa iziqwenga ezimbalwa kunye okanye usebenzise isiqwenga esinye esikhulu. Ukuba usebenzisa iglu, yisanti ngomthi xa sele yomile.
6. Emva koko, yongeza ezinye umbala kunye nokukhuselwa. Thatha ioyile ye-teak uyigalele kwilaphu elithambileyo, uyihlikihle kwisiciko.
7. Songa iihenjisi zentsimbi kwisivalo kuqala, emva koko ungqinelane nesakhelo kwaye ujike endaweni. Oku kuyakukhusela itroli yakho.
8. Okokugqibela, unokongeza iihaksi ngaphambili okanye icandelo leemagnethi elingaphakathi kwisiciko. Ixesha lokumema ezinye iindwendwe kwaye ufumane ukupheka kwe-BBQ. Burgers, nabani na?
Jonga iziphumo ezigqityiweyo apha ngezantsi ...
Iivaranda ezincinci zokuhombisa
Izixhobo zegadi ezinesitayile ezingama-20 zokucoca indawo yakho yangaphandle
I-RHS Hampton 2021: zonke iinkcukacha
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Uyenza njani into eyimfihlo kwigadi yakho
Nqanaba lokukhulisa izakhono zakho nge-Alexa
Sithathe ingqalelo yile dolophu yokulungiswa kwakhona Iibhedi zeentsuku eziyi-9 zokukunceda uphumle ngesitayile
Izitulo zamaqanda ezixhonyiweyo ezingama-21 kwigadi yakho kulo nyaka Yintoni 'i-shoffice'? Uyenza njani eyakho
U-Hack utyhila indlela yokuphucula impilo yezityalo
Izimvo zoyilo lwegadi yendawo yakho yangaphandle
Uyenza njani eyakho ikrisimesi eqhekezayo
Ividiyo: Ungayihombisa njani grey
Uyikhulisa njani iprotein yakho esekwe kwisityalo
Izimvo zokwenza eyakho igadi yokuphilisa
Amacebo ombala ngepinki
imibono yokuhombisa ithanga
izindlu ezinkulu zezinja ngaphandle